पत्रकारमाथी हातपातबारे प्रहरी प्रवक्ता लाइभ, यस्ता पनि वडा अध्यक्ष-पावरको चरम दुरुपयोग ! भिडियो) « News24 : Premium News Channel
पत्रकारमाथी हातपातबारे प्रहरी प्रवक्ता लाइभ, यस्ता पनि वडा अध्यक्ष-पावरको चरम दुरुपयोग ! भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’ को आज ३४५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विभिन्न विषयमा विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१. वडा अध्यक्षको दादागिरी, अदालतको आदेश पनि मान्दैनन्
काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिका २९ अनामनगरमा निर्माणाधीन घरको विषयमा वडा अध्यक्ष कुश ढकालले अदालत र महानगरकै आदेश पालना नगरेको भेटिएको छ । पर्वतका नारायण प्रसाद शर्माले स्थानीय गोपाल दास डंगोलको जग्गा भाडामा लिएर व्यापारीक प्रयोजनका लागि २ वर्ष अघिदेखि स्टील फ्रेम स्टकचर घर निर्माण गर्न लागेका छन् । नारायण शर्माले वडा कार्यालयमा नक्सा पासको डिजाइनसहित २ लाख ११ हजार रुपैया राजश्व पनि तिरिसकेका छन् । तर वडा कार्यालयले भने कहिले सार्वजनिक जग्गा मिचेको त कहिले पेश गरेको नक्सा भन्दा बढी घर बनाएको भन्दै पटक पटक अवरोध गर्दै आएको छ ।
२. प्रहरीको दादागिरीलाई कसले कार्वाही गर्ने ?
काठमाडौं । कार्यक्रमको गत शनिबारको एपिसोडमा रिपोर्टिङका क्रममा पुगेको हाम्रो टिमलाई नयाँ बसपार्क स्थित प्रहरीले हातपात गरेको देखाएका थियाँै । यस बिषयमा प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग संवाद गर्न खोजेपनि फोन उठेको थिएन । तर घटना भएको ५ दिनसम्म पनि देखिने गरी प्रहरीले हातपात गर्ने प्रहरी माथि कारवाही त परको कुरा छानबिन समेत गरेको छैन । रातिको समयमा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा चिया बेच्ने युवाहरुलाई धरपकड गर्ने गरेको बिषयमा हाम्रो टिम रिपोर्टिङका लागि बसपार्क क्षेत्रमा पुगेको थियो ।
३. पोल्याण्ड जाने सपना बोकेका सयांै युवा यसरी ठगिए !
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोमा रहेको दृष्मा ओभरसिज प्रा.लि.ले रोजगारीको अभावमा पिल्सिरहेका सयाँै युवाहरुलाई युरोपको आकर्षक सपना देखाएर करोडाँै ठगी गरिरहेको पाइएको छ । दृष्मा ओरसिजले ५ सय भन्दा बढी युवालाई पोल्याण्ड लैजाने भन्दै २५ हजारदेखि ५ लाखसम्म असुल गरेको छ । दृष्मा ओरसिजका सञ्चालक दिपक तामाङ र बिमला तामाङ हुन् । मेनपावरले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कारवाहीबाट उम्कन पैसा लिने माध्यम स्वरुप आँफैले सहकारी खोलेर कारोवार गरेका छन् ।